မူလနရော » Nagasaki
Updated: 2016-10-25 11:04
ဆက်ဆဲ ဘိူး ဆိပ် ကမ်း
ဆက် ဆဲ ဘိုး ဆိပ် ကမ်း ဟာ ကျူရှူး ရဲ့ အနောက် မြောက် ဖက် ၊ခရိုင် မြောက် ရဲ့ အလည် ပိုင်း မှာ တည် ရှိ ပါ တယ်။ ဆက် ဆဲ ဘိုး ဆိပ် ကမ်း ကနေ ပြီး တော့ ဟီ ရ ဒို အထိ ၂၅ ကီ လို မီ တာရှည်ပြီး ပင် လယ် ရေ...
Updated: 2016-09-26 15:34
နာဂစခိ ခရိုင်က ခွန်းချိ ပွဲတော်
နာဂစခိ ခွန်းချိ ပွဲတော် ဟာ ဥဂျိဂမိ (ဒေသတွင်းကိုးကွယ်သော နတ်ဘုရား ) စူဝ နတ်ဘုရားကျောင်း မှာ ကျင်း ပ ပြုလုပ်လေ့ ရှိတဲ့ ဆောင်းဦးရာသီ ပွဲတော် တစ်ခု ပဲဖြစ်ပါတယ်။ ရှေးယခင်ကတည်း က သမိုင်းရှိတဲ့ ပွ...
နာဂစခိ(Nagasaki) ဒီကနေ့ မှာတော့ ဒုတိယ ကမ္ဘာစစ်တုန်း က အနု မြူ ဗုံး ဒဏ် ခံ ခဲ့ ရတဲ့ နာဂစခိ ခရိုင် ကို ရောက် ရှိ လာ ပါတယ်။ နာဂစခိ ခရိုင် မှာ ကေ တာ့ လည် စရာပတ် စရာ အင်မတန်ပေါ များ ပါတယ်။ သဘာဝ ပတ...
Updated: 2016-06-09 11:09
မစ်ဆူဘီရှိ နာဂစခိ သဘောင်္ ကျင်း
ဒီ သမိုင်း ပြ တိုက် ဟာ ၊ နာဂစခိ သင်္ဘော တည် ဆောက်ရေး ကျင်း က ဂျပန် နိုင် ငံ ရဲ့ စက် မှု တိုး တက် ရေး ကို တစ်ထောင့် တစ် နေ ရာ က ထောက် ပံ့ ပေး ခဲ့ တဲ့ နေ ရာ တစ် ခု ဆို တာ ကို နောင်လာနောင် သားေ...
Updated: 2016-06-09 10:24
အိုးအူရ ချက် ကျောင်း
နာဂ စ ခိ မှာ အခြေ ချ နေ ထိုင် နေ တဲ့ နိုင် ငံ ခြား သား တို့ အတွက် ဆောက် လုပ်ပေး ခဲ့ တဲ့ ဥရောပ အလယ် ပိုင်း လက် မှု အနု ပညာ ကိုယ် စား ပြု သော ကနုတ် တို့ စီချယ် ထား တဲ့ နိုင် ငံ အတွင်း ရှေး အက...
Updated: 2016-06-06 14:49
၁၈၇၉ ခု နှစ် မှာ ဂရိ လူ မျိုး တွေ များ ပြား ခဲ့ တဲ့ ရှိစွတ် ၊ ခုရော့စခိ မှာ သာသနာပြု နေ တဲ့ ဖာသာ ဒိုရော က လေတို့ ပြင်း ထန် စာ တိုက် တဲ့ တောင်စောင်း မှာ ၊ ၁၈၈၂ ခု နှစ် ၊ ကိုယ့် စားရိတ် နဲ့ ကိ...
Updated: 2016-05-24 14:16
ယူမိဟာရိ ဒါခဲ ရှု ခင်း ကြည့် မျှော်စင်
စက်စဲဘိုးမြို့ ရဲ့ သဘာဝ အလှ နဲ့ မြို့ ရဲ့ အလှ ကို တစ် ခါ ထဲ နဲ့ ကြည့် ရှု ခံ စား နိုင် တဲ့ ယူမိဟာရိဒါ ခဲ ရှုခင်းကြည့် လေ့ လာ ရေး မျှော် စင် ။ အနောက် ပိုင်း နယ် က အတော် အတန် လှမ်း တဲ့ ဂေါတိုး...
Updated: 2016-05-09 15:56
စက်စဲဘိုး မြို့ တော် ရဲ့ အရှေ့တောင် အရပ် မှာ တည် ၇ှိ ပြီး ၁၅၂၀၀၀၀ ဟဲဟိုးမီတာ ရှိ တဲ့ နေရာ မှာ ဟော် လန် နိုင် ငံ ရဲ့ မြို့ ပြ ပုံ စံ အတိုင်း ပြု လုပ် ထား တာ ဖြစ် ပါ တယ်။ ဂျပန် နိုင် ငံ ရဲ့ ၇ှား ပါး လှ...